नेपाल टेलिकमको टावरमा आगजनी
साउन १८, बैतडी । अज्ञात समुहले शुक्रवार राती जिल्लाको डिलासैनीस्थित् नेपाल टेलिकमको टावरमा आगजनी गरेको छ । डिलासैनी गाउँपालिका ४ मठैराज बलालीमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा अगजनी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नीरिक्षक दिपक पातलीले बताए । अगजनीबाट टावरमा रहेका ब्याट्री र त...
व्यावसायिक अलैँचीखेतीतर्फ डोटीका किसान आकर्षित, ४०० हेक्टरमा खेती हुँदै
साउन १७, डोटी । पछिल्लो समय डोटी जिल्लाका किसानको अलैँचीखेतीमा आकर्षण बढेको छ । किसानले धान, मकै तथा कोदोलगायतका अन्न बाली उब्जानी हुने खेतीयोग्य जमीनलाई मासेर धमाधम अलैँची लगाउन थालेका छन् । अन्य बालीले भन्दा अलैँचीको आम्दानी बढी हुने भएकाले पनि अलैँची खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको केआइ...
शुक्लाफाँटाको राजस्व संकलन ह्वात्तै घट्यो
मदन गिरी महेन्द्रनगर । गत आवमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको राजस्व संकलन अघिल्लो आवको तुलनामा ह्वात्तै घटेको पाइएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालका अनुसार गत आवमा रू. ८६ लाख २३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आवमा भने कार्यालयले ६ करोड ५१ लाख राजस्व सं...
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमितता
पंखबहादुर शाही दैलेख । दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमियतता भएको पाइएको छ । नगरपालिकाको राकम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्चार्जले स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमियतता गरेको पाइएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र इन्चार्ज नरेश्वरी शाहीले स्वयंसेवि...
महाकाली भन्सारले राजस्वको लक्ष्य भेटेन
बैतडी (अस) । बैतडीको महाकाली भन्सार कार्यालय, झुलाघाटले गत आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सकेन । कार्यालयले वित २ आवदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । गत आवमा रू. १ करोड ९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको कार्यालयले ८९ लाख ७७ हजार मात्र संकलन गरेको छ । यस्तै अघिल्लो आवमा रू. १ करोड ९...
आन्तरिक राजस्व कार्यालय : कैलालीले उठायो ३ अर्ब ७२ करोड
धनगढी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कैलालीले गत आवमा ३ अर्ब ७२ करोड ६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व विभागले कुल ३ अर्ब ४२ करोड २० लाख ३८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यभन्दा ८ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कैलालीका निमित्त प्रमुख काशीराज पौड्यालले...
सुदूरपश्चिम प्रदेशः निर्यात करोडमा, आयात भने दोब्बरले बढ्दै
साउन १३, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख भन्सार नाका कैलाली भन्सारबाट विभिन्न सामग्रीको आयात वर्षेनि बढ्दो छ । निर्यात घट्दो क्रममा देखिएका बेला आयात भने वर्षेनि दोब्बरले बढ्दै गएको पाइएको हो । यो नाकाबाट आयात सामाग्री अर्ब रुपियाँमा छ भने निर्यात करोडमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/ ०७५ मा...
पोल गाडिएको दुई वर्षमा पनि आएन बिजुली
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८, रैकवार बिचवाका स्थानीय लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । साविकको रैकवार–बिचवा गौडी टोलमा बिजुलीको पोल गाडिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत बिजुली नआएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले कहिलेकाहीँ आउने लो भोल्टेजको बिजुलीले जीवन कष्टकर भए...
भीमदत्त र महाकालीबीच रोयल्टी विवाद कायमै
मदन गिरी महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाबीच नदीको स्रोत बाँडफाँटको विवाद चुलिँदै गएको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि दुई नगरपालिकाबीच रहेको महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनमा टकराव देखिँदै आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा महाकाली नदी स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको बाँडफाँटमा कुरा नमिले...
आन्तरिक राजस्व कैलालीबाट रू.३ अर्व ७२ करोड संकलन
साउन १२, धनगढी(अस) । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीले रू. ३ अर्व ७२ करोड ६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा अघिल्लो आव २०७४/ ०७५ भन्दा ८ दशमलव ८४ प्रतिशत बढि राजस्व संकलन गरेको हो । राजस्व विभागले कुल रू.३ अर्व ४२ करोड २० लाख ३८ हजार राजस्व संकलनको...